Cumar C/rashiid oo loo dhiibay liis ay ku qoran yihiin G/Wasiirada.. - iftineducation.com
iftineducation.com – Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa saacada markay aheyd 8:00 fiidnimo ee xiliga Muqdisho waxaa la geeyay xarunta Madaxtooyada Villa Somalia, kadib markii saakay la dejiyay Hotel Peace, oo ku dhow Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Gaadiidka fuqulan ayaa waxaa hotel Peace looga soo qaaday Cumar C/rashiid, iyadoo loo diray in uu ka soo kaxeeyo Sarkaal ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida Qaranka.
Cumar waxa uu hadda ku sugan yahay Madaxtooyada Magaalada Muqdisho, oo sidoo kale ay ku sugan yihiin Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sii Haayaha Wasiirka Garsoorka & Dastuurka Faarax Sheekh C/qaadir Maxamed, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha & Amniga C/kariin Xuseen Guuleed iyo Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida Qaranka C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe).
Ilo lagu kalsoonaan karo, ayaa sheegay in Cumar C/rashiid Madaxtooyada loogu sameeyay casho sharaf lagu soo dhaweynaayo, xilli lagu wado in uu noqdo Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Somaliya.
Ka dib cashada loo sameeyay Cumar C/rashiid, ayaa waxa uu kulan gaar ah Madaxtooyada kula qaatay Madaxweynaha, Wasiir Faarax C/qaadir, C/kariin Guuleed iyo C/laahi Sanbaloolshe.
Guuleed iyo Sanbaloolshe, ayaa waxay dhabarka ka riixayaan in Cumar C/rashiid laga dhigo Ra’iisal Wasaaraha cusub, xilli labadooduba ay xusul-duub ugu jiraan inay iska dhex arkaan Golaha Wasiirada cusub.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Somalia oo diiday in magaciisa la xuso, ayaa sheegay in kulanka looga hadlaayo xubnaha cusub ee Golaha Wasiirada ee imaan doono, oo qaarkood liis lagu soo diyaariyay magacyadooda loo dhiibay Cumar C/rashiid. Sidoo kale waxay ka wada hadlayaan cidda mudan in lagu soo daro Golaha.
Si kastaba ha-ahaatee waxaa la rumeysan yahay inay soo laaban doonaan toboneeyo ka mid ah Golihii Wasiirada ee Xukuumadii C/weli, iyadoo ay xusid mudan tahay in wejiyo cusub lagu dhex arki doono Golaha Wasiirada cusub.